Mancini oo ugu cad cad shaqada Italy – Gool FM
“Waa wax laga xishoodo inay naga dhashaan goolashan oo kale” – Aubameyang oo dhaleeceeyay daafacyada Arsenal
Varane oo ka hadlay xiddigaha Neymar iyo Mbappé kahor kulanka Arbacada ee Champions League
Mancini oo ugu cad cad shaqada Italy
Kaafi February 2, 2018
(Rome) 02 Feb 2018. Laba majaladood uu waa weyn ayaa qoray in tababaraha Zenit St Petersburg, Roberto Mancini ugu cad cad yahay shaqada tababare ee Italy.
Gazzetta dello Sport iyo Corriere dello Sport waxa ay aaminsan yihiin in Mancini “Boos wacan u joogo” bedelka Giampiero Ventura, kaddib markii khamiistii la shaaciyey bartilmaameedyadii jagadaas, waxaa ka mida Antonio Conte, Carlo Ancelotti iyo Claudio Ranieri.
Tababatihii hore ee Man City waxa uu majaraha u qabtay Zenit xagagii hore waxa uuna ku hoggaamiyey kalinta labaad ee horyaalka Russia iyo wareegga 32-da ee Europa League.
Arintan ayaa imaaneysa kaddib markii godoomiyaha cusub ee FIGC, Roberto Fabbricini uu qishay tababaraha 21-jirada Luigi Di Baigio uusam Italy ku hoggaamin doonin kulamada England iyo Argentina bisha soo socota
Ma cadda in ay kooxda reer Raussia u fasixi doonto Mancini in uu la hadlo Azzurri.
Luiz Suarez oo ka saa'id caleeyey Messi iyo Ronaldo dhinaca gool dhalinta sanadkan 2018
Conte oo loo soo bandhigay Shaqo uu uga soo baxsanayo Chelsea